United Nations Provides Food Assistance for Migrant Workers Returning from China and Thailand | United Nations in Myanmar
Myawaddy - In support of the Government’s COVID-19 response, the United Nations World Food Programme (WFP) is ready to assist tens of thousands of migrant workers expected to return from neighboring countries, with the majority of them from China and Thailand.
Since April, WFP, in collaboration with the Ministry of Health and Sports and the respective state and regional governments, has provided safe and nutritious cooked meals, meal boxes and, wherever feasible, fortified blended food to some 35,000 returning migrant workers upon their arrival and while they were in transit sites and quarantine centres in Kayin, Mon and Shan states and Yangon and Tanintharyi regions.
In the coming weeks, many more are expected to return as businesses and factories they once worked for have been forced to close down due to COVID-10. Among them, some 150,000 are expected to be returning mostly from Thailand.
“At this challenging time, it is vital that the returning families’ essential food and nutrition needs are met while they comply with the Government’s measures to keep the virus at bay,” said Stephen Anderson, WFP Myanmar Country Director.
“When the first batches of returnees arrived from Thailand, we faced hurdles in managing food and other support for them as it was not possible to know how many would come back and when,” U Bo Bo Wai Maung, the Minister for Social Affairs of the Kayin State Government said.
“Now, as we faceasecond wave of returning migrants, thanks to WFP working together with the State Government, we are providing the returnees nutritious food and drinking water from the moment they set foot in Myanmar and throughout their quarantine stay.”
Starting from early May, WFP has been organizing weekly aid flights connecting Yangon and Kuala Lumpur bringing in vital humanitarian supplies as well as providing transport to aid worker teams.
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ နေရပ်ပြန် မြန်မာလုပ်သားများအတွက် စားနပ်ရိက္ခာများ ကုလသမဂ္ဂ ထောက်ပံ့မည်
မြဝတီ - နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါတုံ့ပြန်ရေး လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးသည့်အနေဖြင့်၊ ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဥ် (WFP) သည် အဓိကအားဖြင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ ပြန်ရောက်လာကာ အသွားအလာကန့်သတ်မှုခံယူကြမည့် ဦးရေသောင်းချီသော နေရပ်ပြန်မြန်မာလုပ်သားများအတွက် စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အာဟာရအထောက်အပံ့များ ထောက်ပံ့ရန် စီစဥ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
WFP အနေဖြင့် ဧပြီလမှ စတင်ကာ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရပ်ပြန်ရောက်လာသည့် လုပ်သား ၃၅,၀၀၀ ကျော် အတွက် ထမင်းဟင်းလျာများကို ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးခြင်း၊ ထမင်းဘူးများဖြင့် ဖြန့်ဝေပေးခြင်းနှင့်အတူ အချို့သော ထောက်ပံ့နိုင်သည့်နေရာများတွင် အာဟာရမြှင့်အစားအစာများအား ဖြည့်စွက်ပံ့ပိုးခြင်းကိုပါ ပေးအပ်‌ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဖော်ပြပါ အထောက်အပံ့များကို နေရပ်ပြန်လုပ်သားများ နိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာစဥ်၊ ယာယီစုရပ်များသို့ ရောက်ရှိစဥ် နှင့် အသွားအလာကန့်သတ်မှုခံယူစဥ် ကာလတစ်လျှောက် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် တိုင်း‌ဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ အသီးသီး၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါ၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ခြင်းကြောင့် လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ နေရပ်ပြန်လုပ်သားများ ထပ်တိုးဝင်ရောက်လာရန် မျှော်လင့်ထားပါသည်။ နေရပ်ပြန် ဦးရေ ၁၅၀,၀၀၀ ဝန်းကျင် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်းနှင့် အများစုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဝင်ရောက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
“အခုလို အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ ကပ်ရောဂါကို တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက် နေရပ်ပြန်လာမယ့် မိသားစုတွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ အစီအမံအတိုင်း အသွားအလာကန့်သတ်မှုခံယူကြဖို့ တကယ့်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို အသွားအလာကန့်သတ်နေကြတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ အစားအစာနဲ့ အာဟာရပြည့်ဝနေဖို့လည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်” ဟု WFP ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် စတီဖင်အန်ဒါဆန် က ပြောသည်။
“ပထမအကြိမ် ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေ ပြန်ဝင်ခဲ့လာတုန်းကဆိုရင် တော်တော်လေး ကသီလင်တနိုင်ခဲ့တယ်။ တစ်ရက်တစ်ရက် လူဦးရေဘယ်လောက်ပြန်ဝင်လာမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့မရခဲ့ဘူး။ သူတို့စရောက်တဲ့အခါမှာ ထမင်းကျွေးဖို့ သောက်သုံးရေစီစဥ်ဖို့ အခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်။ အခု second wave မှာ WFP အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရနဲ့ ပူး‌ပေါင်းပြီးတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားကနေပြန်လာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကို
မြန်မာနိုင်ငံကို ခြေချလျှင်ချခြင်း နဲ့ ကွာရန်တင်းစင်တာတွေမှာ နေထိုင်ချိန်မှာ အာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝရှိတဲ့ အစားအသောက်တွေနဲ့ သောက်သုံးရေတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ လူမှုရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး ဦးဘိုဘို‌ဝေမောင်က ပြောကြားသည်။
မေလမှ စတင်၍ WFP အနေဖြင့် လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့များနှင့် ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းများအား သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် ရန်ကုန်မြို့နှင့် ကွာလာလမ်ပူမြို့သို့ ချိတ်ဆက်ကာ လေယာဥ်ခရီးစဥ်များကို အပတ်စဥ်ပြေးဆွဲလျက်လည်း ရှိပါသည်။